Inowanikwa - Shenzhen HUANET Technology CO., Ltd.
Kuwedzeredza mwenje kubatanidza kune yega yega imba, kune ese bhizinesi,
Paki yega yega inobvumidza vanhu kubatana zvakanyanya nemhuri dzavo nemabhizinesi kuti vashande zvakanyanya
Chii chinogona kuitwa neHUANET nhasi?
Hupfumi hwemienzaniso yekupedzisira
Mhando dzese dze OLT / ONU / Transceiver / Chinja / WDM inogona kupihwa, ine mhando yepamusoro, mutengo wemakwikwi, uye basa rakanakisa.
Nyanzvi FTTH, FTTX mhinduro chiitiko
HUANET ine makore anopfuura makumi maviri enhoroondo, anopfuura gumi masevhisi mune yayo portfolio uye zviuru gumi nevatengi vakashanda.
OEM & ODM Yakagadziriswa Service
OEM & ODM sevhisi inogona kupihwa neHUANET, iine ruzivo uye simba rakakosha kuti uve nechokwadi chemabasa akanaka uye sevhisi.
Iyo MA5800, iyo yakawanda-sevhisi yekuwana mudziyo, ndeye 4K / 8K / VR yakagadzirira OLT yenguva yeGigaband. Iyo inoshandisa kugovera zvivakwa uye inotsigira PON / 10G PON / GE / 10GE mune imwechete chikuva. Iyo MA5800 inounganidza masevhisi anotapuriranwa pamusoro pema media akasiyana, inopa yakakwana 4K / 8K / VR vhidhiyo ruzivo, inoshandisa sevhisi-based virtualization, uye inotsigira inotsvedzerera shanduko kune 50G PON. Iyo MA5800 furemu-yakaumbwa dzakateedzana inowanikwa mumatatu mamodheru: MA5800-X17, MA5800-X7, uye MA5800-X2. Izvo zvinoshanda muFTTB, FTTC, FTTD, FTTH, uye D-CCAP network. Iyo 1 U bhokisi-rakaumbwa OLT MA5801 rinoshanda kune ese-optical mukana wekuvhara munzvimbo dzakaderera-nzvimbo.
HZW-HG911A (HGU) iri mini GPON ONT chinouraya mudziyo, iyo inoshanda kune yakachena Broadband kuwana.Iyo inotora mini-mhando compact dhizaini dhizaini ine yakakwira-kubatanidza uye inogona kupa 1 GE, RJ45, interfaces. Inotsigira tekinoroji yechikamu che2 Ethernet switch uye zviri nyore kugadzirisa nekugadzirisa Iyo inogona kuiswa kune FTTH / FTTP yekushandisa kunyorera kune vanogara uye vebhizinesi vashandisi. uye hwokugadzira chinodiwa GPON Equipment.
Iyo 100G CFP2 ER4 optical transceiver inosanganisa iyo yekufambisa uye yekugamuchira nzira kune imwe module. Padivi rekufambisa, ina nzira dze serial data hova dzinotorwa, kudzoserwa, uye kupfuudzwa kune mana laser madhiraivha, ayo anodzora mana emagetsi-ekumesa modulated lasers (EMLs) ane 1296, 1300, 1305, uye 1309 nm centre wavelengths. Iwo manyowani emasaini anobva awedzeredzwa kuita imwechete-modhi faibha kuburikidza neindasitiri-yakajairwa LC chinongedzo Parutivi rwekutambira, ina nzira dze optical data hova dzakasarudzika DE-dzakawedzeredzwa neyakaunganidzwa Optical demultiplexer. Yese data data inowaniswa nePIN foto-detector uye trans-impedance gudzazwi, yakagadziriswazve nguva, uye ichipfuudzwa kune inoburitsa mutyairi. Iyi module inoratidzira inopisa-yakavharika magetsi interface, yakaderera magetsi kushandisa, uye MDIO manejimendi manejimendi.
Iyo S6700 akateedzana switch (S6700s) anotevera-chizvarwa 10G bhokisi switch. Iyo S6700 inogona kushanda seye switch yekuwana muInternet data Center (IDC) kana switch yepamberi pamambure kambasi. Iyo S6700 ine indasitiri-inotungamira mashandiro uye inopa inosvika makumi maviri nemana kana makumi mana nemasere-mutsara-kumhanya 10GE madoko. Inogona kushandiswa mu data centre kupa 10 Gbit / s kupinda kumaseva kana basa seyakagadziriswa switch pane kambasi network kupa 10 Gbit / s traffic aggregation. Uye zvakare, iyo S6700 inopa akasiyana siyana masevhisi, akazara ekuchengetedza marongero, uye akasiyana QoS maficha kubatsira vatengi kuvaka scalable, inokwanisika, yakavimbika, uye yakachengeteka data nzvimbo. Iyo S6700 inowanikwa mumhando mbiri: S6700-48-EI uye S6700-24-EI.
CloudEngine S6730-H Series 10 GE Shanduko dzinounza 10 GE downlink uye 100 GE uplink yekubatanidza kune emabhizimusi macampus, vatakuri, epamusoro dzidzo masangano, uye hurumende, kubatanidza yemuno Wireless Local Area Network (WLAN) Access Controller (AC) kugona, kutsigira kusvika 1024 WLAN Access Points (APs).
S3700 Series Enterprise haizoshandisi
Ye Fast Ethernet inoshandura pamusoro peyakaumbika-peya mhangura, Huawei's S3700 Series inosanganisa kuvimbika kwakaratidza nemabatiro akaomarara, chengetedzo, uye manejimendi maficha mune inoenderana, simba-rinoshanda switch.
Flexible VLAN kutumirwa, PoE kugona, yakazara nzira yekuita, uye kugona kutamira kune IPv6 network inobatsira vebhizinesi vatengi kuvaka inotevera-chizvarwa IT network.
Sarudza Standard (SI) mhando dzeL2 uye yekutanga L3 switch; Enhanced (EI) mamodheru anotsigira IP multicasting uye zvakanyanya kuomarara nzira dzekufambisa (OSPF, IS-IS, BGP).
5G Fronthaul Semi-Inoshanda WDM Solution
Foshan Guta kumatunhu WDM kesi
1.1. Gadzira nyowani 40-wave DWDM system ine imwechete chiteshi chiyero che10Gbps
1.2. Tsigira 1 + 1 mbiri-nzira-otomatiki switching dziviriro
HUANET yakapinda NETCOM Exhibition
Kubva Nyamavhuvhu 25th kusvika 27th, 2017, NETCOM 2017 yakaitirwa kuExpo Center Norte, Sao Paulo, Brazil. HUANET yakaunza pamwechete seti mbiri dzekugadzirisa mhinduro uye zvigadzirwa kubva kuFTTH neWDM, iyo yakaratidza zvizere simba reHUANET mumusika weBrazil.
HUANET yakapinda kuCommunicAsia Exhibition
Kubva Chivabvu 23 kusvika 25, 2017, CommunicAsia 2017 yakaitirwa kuMarina Bay Sands Singapore Iyo HUANET yakaunza pamwechete seti mbiri dzekugadzirisa mhinduro uye zvigadzirwa kubva kuFTTH neWDM, izvo zvakaratidza zvizere simba reHUANET mumusika weSoutheast Asia.
HUANET yakapinda kuConvergence India Exhibition
Kubva Feb 8 kusvika 10, 2017, Convergence India 2017 yakaitirwa kuPragati Maidan, New Delhi, India. Iyo HUANET yakaunza pamwechete maviri seti ehurongwa mhinduro uye zvigadzirwa kubva kuFTTH neWDM, iyo yakaratidza zvizere simba reHUANET mumusika weMiddle East.
Huawei Qsfp +, Xfp Transceiver, External Modulation Transmitter, Sfp C ++, Optical Fiber Module, Huawei Olt Mutengo,